Iindaba -Ukufakwa komnyango emnyango wokufakwa komnyango-intshayelelo yendlela yokumisa emnyango
Isimamisa ucango sisixhobo esincinci emva kocango ngalunye oluthintela ucango ukuba lubethe eludongeni. Nangona isimamisi incinci, inefuthe elikhulu. Isimamisi emnyango sinokunciphisa ingxolo kwaye sithintele umnyango ungqubane nodonga kwaye wenze umonakalo emnyango okanye eludongeni.
Ufakelo lomnyango wokufunxa
Isango lokumisa umnyango ufakelo-inkcazo emfutshane ngesiciko sokumisa ucango
Isimamisi emnyango sikwabizwa ngokuba kukuchukumisa umnyango. Ikwasisixhobo esifunxa kwaye silikhangele igqabi lomnyango emva kokuba livulwe ukuthintela ukuba lingavalwa ngumoya ovuthuzayo okanye lichukumise igqabi lomnyango. Izinto zokumisa umnyango zahlulwe zangumqobo osisigxina kunye neminyango yombane. Izinto zokumisa ezisisigxina zemagneti zihlala zisetyenziswa kwiminyango eqhelekileyo kwaye zilawulwa kuphela ngesandla; izixhobo zokumisa ucango zombane zisetyenziswa kwiminyango yomlilo nakwezinye izixhobo ezilawulwa ngombane kunye nezixhobo zefestile, ezinolawulo zombini kunye nolawulo oluzenzekelayo. umsebenzi wolawulo.
Isango lokumisa umnyango ufakelo-emnyango wokumisa indlela yokumisa
Kuqala, qinisekisa nomniniyo ukuba ingaba isiciko sesango sifakelwe emhlabeni okanye eludongeni; emva koko uvule ucango kwelona zinga liphezulu lifunekayo ukuvavanya ukuba umsebenzi wokumisa ucango usengqiqweni nokuba umgama phakathi kwesiciko sokumisa kunye nomnyango ufanelekile. Beka umnyango emva kokuba ubume kakuhle, vula ucango kwaye uzame ukuba ngaba olwenziweyo lusengqiqweni kusini na, kubandakanya nokuba isicango emnyango singena kancinci okanye siphuma kancinane, ithini i-engile ethile yokumisa ucango; emva kokugqibezela indawo, ibeke emgangathweni kunye nakwithayile zomgangatho, kuqala Khangela indawo yokuma emnyango, sebenzisa ipensile ukuqinisekisa ubume bomnyango kwithayile zomgangatho, inkosi yomsebenzi isebenzisa ipensile ukuzoba umgca umhlaba, kuqala qinisekisa indawo yokugqibela yomnyango ovulekileyo, emva koko uqinisekise indawo yokugqibela yokufakwa kwesango lokumisa; umphathi wempangelo wenza isimamisi emnyango Uphawu lwendawo yokugqibela, isizathu sokuba kufuneka lubekwe kabini, ukukhangela ucango kunye nolokumisa ucango, kukulungiselela okungcono. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa i-engile yokumisa umnyango kunye nokuvulwa komnyango; Umsebenzi olandelayo kukugrumba umbane wombane kunye nokugrumba umngxunya wokufaka isitovu sasemhlabeni. Umsebenzi ubhola imingxunya kwiithayile zomgangatho, kwaye umsebenzi wokwakha iAijia uyayifaka. Iithayile zomelele ngokwenene. Esi simisi-mnyango sifuna ukumba umngxunya kuphela; isiphelo esisigxina sesiciko sokumisa sifakwa, kwaye isikrufu kuso siyomelela. Isimamisa ucango sahlulwe sasisiphelo kunye nomnyango. Isiphelo esimiselweyo kufuneka sifakwe. Qinisa izikrufu ngaphambili, emva koko usebenzise isitshixo se-engile yangaphakathi ukuze uqinise izikrufu emhlabeni okanye eludongeni; ukusebenzisa i-engile encinci yangaphakathi yokujija izikrufu ngumsebenzi olungileyo, akukho mava, emva koko uye uqinisekise indawo, ukubetha ngenqindi, kwaye Emva kwenkqubo yendibano, umsebenzi olandelayo kukufaka isiphelo esisigxina emhlabeni. Sebenzisa isixhobo esibandakanyiweyo sangaphakathi ukuqinisa izikhonkwane kwisiphelo esisigxina, kwaye isivalo somnyango siya kufakelwa ngokuzenzekelayo; isiphelo sokumiswa emnyango sinokuqiniswa ngezikrufu. Akuncedi nganto ukufaka isiphelo esisigxina somnyango ukuze ukufunxe ukukhanya. Kuyimfuneko ukufaka ucango. Isitshixo kukufumana isiphelo somnyango. Indlela kukuvula ucango ukuya kwelona liphezulu, emva koko ufumane eyona ndawo ubukuyo emnyango, kwaye uqinise ucango lokugqibela ngezikrufu. Ukufunxa; Lungisa i-engile yesiphelo esimiselweyo sesiciko sokumisa kwaye uyiqinise ngokupheleleyo. Inyathelo lokugqibela kufakelo lwesiciko sesango kukuhlengahlengisa i-engile yesimamisi emnyango ukuze yonke ilingane nesiciko sokumisa emnyango, kwaye ekugqibeleni uqinise isikere kakuhle.
Ufakelo lwesango lokumisa ucango lokumisa ucango
Ukuthintela amaqhuma ngexesha lokuphathwa kwesimamisi; xa ucoca isivingco emnyango, zama ukungamanzisisi izitya zesingxobo sentsimbi. Okokuqala, sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye umsonto owomileyo womqhaphu ukususa uthuli, emva koko wosule ngelaphu elomileyo ukuze uhlale womile. Sukusebenzisa iiarhente zokucoca ezinemibala, okanye ukonakalise ngenkani umaleko womphezulu.
Ixesha Post: Jun-29-2021